Indlu yaseCzyprki kumanzi angasemva eMasurian kufutshane nehlathi
Czyprki, Warmian-Masurian Voivodeship, Poland
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguWaldemar
Indlu entsha yonyaka wonke eMasuria kumanzi angasemva kwindawo yehlathi elikhulu ukuya kuthi ga kwi-10 yabantu.
Indlu yethu ebanzi (malunga ne-200m2) inamagumbi okulala amathathu amakhulu kunye negumbi lokuhlala elinekhitshi, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlambela, kwaye kwi-attic kukho amagumbi amabini okulala, i-sauna kunye negumbi lokuhlambela.
Kummandla omkhulu oluhlaza, kukwakho nendawo yomlilo kunye nebarbecue, indawo ephumlayo kunye nesikhephe sokuqubha kwindawo ephuphumayo yangasese Ukuzonwabisa emaphandleni kuthe cwaka, apho abamelwane kuphela ziielk, amaxhama kunye nengwamza. PL / ENG
Indlu yethu lukhetho olukhulu kubantu abafuna ukuthula, indalo kunye nentlango kunye nokunxibelelana ngokusondeleyo nendalo yasendle. Ubumelwane bulungele ukuhamba nokuhamba ngebhayisekile. Kummandla okufutshane kukho zonke iidolophu ezinkulu zabakhenkethi, ke kubalandeli bokubona indawo kunye nokutya kweMasurian, ikwalukhetho olukhulu.
Indalo, ihlathi, amanzi, umoya ococekileyo kunye noxolo oluninzi kunye nexesha elimnandi lobuvila, ukufunda, ukupheka, ukuhamba
Umnxeba kunye ne-imeyile
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Czyprki